Nikki Haley: Kanada waxay la macaamishay "shaydaan"
NEW YORK - Nikki Haley oo horey usoo noqotay safiirka Mareykanka ee Qaramada Midoobey, ayaa ku eedeysay dowladda Kanada inay la safatay dalal ay ku sifeysay “Shaydaan”, oo taageera qadiyadda Falastiin.
Eedeynta Nikki ayaa timid kadib markii UN-ka meelmariyey qaraar taageeraya dowladnimada Falastiiniyiin, kana soo horjeeday Israel, kaasoo Gollaha usoo gudbisay North Korea.
Iyadoo ka hadlaysay New York shalay, Nikki Haley ayaa sheegtay in Kanada ay qaadatey go’aan lama filaan ku noqday saaxiibada Israel, kaasoo ah mid aan horey looga baran madaxdii ka horeeyay Ra’iisul Wasaare Justin Trudeau.
“Kanada waxay dooneysaa inat qabato kursiga meertada ee Golaha Amniga, waxayna taageero ka raadisay cadowga Israel iyo dalalka u dhaq-dhaqaaqa qadiyadda reer Falastiin,” ayay tiri Nikki.
Go’aanka Kanada waxaa sidoo kale cambaareeyay kooxaha Yahuudda, ee u ololeeya arrimaha Israel, kuwaasoo saameyn ku dhex leh siyaasadda Mareykanka iyo dalal kale oo Yurub katirsan.
Qaraarka North Korea ayaa taageero xooggan ka helay wadamo dhowr ah, iyadoo codka Kanada uu miisaan culus u yeelay, maadaama dalkan uu kamid yahay xubnaha Gollaha Amaanka ee QM.
Waxay ku tilmaameen degaanada ay degan yihiin Yahuudda "dhul Israel xoog ku haysato", iyagoo ku baaqay in dib loogu celiyo Falastiin, islamarkaana la aqoonsado xuduudii la sameeyay 1945-tii.
Nikki Haley ayaa ku fadhiday kursiga Safiirka Mareykanka ee UN-ka intii u dhaxeysay January 2017 ilaa December 2018, xilligaasi oo iska casishay kadib markii khilaaf uu soo dhex-galay iyada iyo Trump.
Inta badan Siyaasiyiinta Mareykanka ayaa si indha la’aan ah u taageera Yahuudda, iyadoo Trump uu u aqoonsaday bariga magaalada Qudus caasimadda Israel kadib go’aan uu soo saarey December, 2017.
Go’aanka Trump ayaa la kulmay cambaareyn caalami ah, waxaana dalal badan ay diideen inay safaaradahooda geeyaan bariga Qudus, halkaasi oo Falastiiniyiinta xoogga looga qabsaday 1967.
Trump oo diiday in uu cunsuri yahay
Caalamka 15.01.2018. 12:08
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo diiday in uu cunsuri yahay...
Imaaraadka oo noqday dalkii ugu horeeyay Khaliijka ee la heshiiya Israel
Caalamka 13.08.2020. 19:29
Soomaali ka carartay Mareykanka oo magangelyo weydiistay Canada
Caalamka 04.10.2018. 09:13